Ikhaya Lebhasi Lesikole ePulazini, eLake View, I-Solar Powered - I-Airbnb
Ikhaya Lebhasi Lesikole ePulazini, eLake View, I-Solar Powered
Golconda, Illinois, i-United States
Ibhasi ibungazwe ngu-Interwoven
U-Interwoven Ungumbungazi ovelele
Leli khaya elincane lebhasi lesikole elisebenza ngelanga libekwe ngaphansi kwesibhakabhaka esivulekile, eduze nehlathi, linokubukwa kwechibi ngaphambili, umbhede ogcwele, ikhishi elinezitofu ezimbili zokushiswa nosinki, nosofa othokomele. Injabulo enhliziyweni yeShawnee National Forest e-Interwoven Permaculture Farm, eLusk Creek Wilderness. Jabulela ukubuka izinkanyezi, ukubhukuda, nemililo yasekamu. I-chorus yemvelo izokuthulisa ebusuku, futhi ikubingelele ekuseni. Yindawo enhle yokuvuka! Ngekhishi, i-AC / Heater, lokhu kungukukhazimula kokugcina !!!
*Sigcina okungenani amahora angu-27 phakathi nezivakashi, futhi sigcina ukuqhelelana komphakathi lapho uxhumana.
Ingaphakathi liqediwe ngephayini elihle elenziwe ngezandla, kusuka ezweni lethu. Kunombhede owodwa ogcwele, nosofa omncane. Ikhishi line-plate eshisayo emibili, usinki we-antique, enamanzi anikeziwe, isihlungi se-Britta Water, izitsha eziyisisekelo, into yokuvula, umshini wekhofi we-french press, i-toaster, amabhodwe ne-pan, amapuleti, izinkomishi, njalonjalo. Kukhona umshini wokushisisa isikhala kanye nengubo kagesi yalabo busuku obupholile kanye nakusasa, kanye nefeni nefasitela le-AC ngezinsuku ezishisayo. Ukukhanyisa okuhle kubonisa ukukhanya okumangalisayo. Inikwe amandla yelanga! Izinto zombhede ezithokomele zinikeziwe. Kunetafula lokudlela nezihlalo, futhi. Asikho isiqandisi, ngakho-ke uzofuna ukuletha okupholile. Uma wenza ukuhlala okunwetshiwe, sizofriza iphakethe lakho leqhwa. Ayikho indlu yangasese ngaphakathi ebhasini. Sinikeza i-outhouse enhle kakhulu, nosinki wokuhlanza izandla namanzi. Kuyindlela emfushane yokuya e-sscale outhouse. Kunendlu yeshawa engaphandle yamanzi apholile etholakalayo ukuze uyisebenzise. Iveranda yangemuva yindawo ekahle yokuphumula nokwenza inkanyezi.
Ibhasi libheka i-acre ezimbili "Lake Harriet". Ukubhukuda, ukudoba ngenhlonipho nokucophelela, nokuzijabulisa kwechibi kuyatholakala. Kukhona ne-swing ebheke echibini, futhi. Jabulela umlilo wokukhempa esitheni somlilo, ohlinzekwa izinkuni. Thatha uhambo lomhlaba noma eduze ehlathini lase-Shawnee National.
SIDINGA ukungena ngaphambi komgwaqo. Uma ungakwazi ukufika ngaphambi kobumnyama, sicela ungayibhukhi indawo. Siphuma ezweni, ngaphansi kwesibhakabhaka esikhulu esimnyama ebusuku. Lokho kungenye yezinto ezinhle kakhulu ngale ndawo, kodwa kwenza ukufika nokungena kube nezinselele kakhulu ebusuku. Yingakho SIDINGA ukungena kusengaphambili.
4.97 · 271 okushiwo abanye
I-Interwoven Farm iseduze ne-Garden of the Gods, i-Lusk Creek Wilderness, i-Indian Kitchen, i-Golconda, i-Eddyville, i-Burden Falls, i-Bell Smith Springs, i-Rim Rock Trail, i-Millstone Bluff, i-Warbluff Audobon Sanctuary, i-Cave-In-Rock, i-Dixon Springs, i-Sand Cave. futhi nokuningi. Ungahamba ngezinyawo kusuka kusayithi. Semngceleni weLusk Creek Wilderness endaweni ezinhlangothini eziningi. Nakuba singakuncomi ukuhamba ngezinyawo ehlane, kukhona umzila omakwe kahle eduze, kanye nezindlela eziningi zokuhamba izintaba ngaphakathi kwedrayivu emfushane.
Idolobha elincane lasePaducah liwuhambo lwemizuzu engu-45 ukusuka epulazini. IPaducah igcwele amasiko, ubuciko kanye nomsebenzi. Idolobha elidala elibukekayo, elinemigwaqo yezitini, indawo ye-foodie ebabazekayo, ama-distilleries, ithiyetha, nezitolo, inikeza okuthile kwawo wonke umuntu. I-Lower Town Arts District, eduze ne-Old Down Town, iyipharadesi labathandi begalari. Indawo yebhizinisi ephithizelayo inazo zonke izinsiza.
Idolobhana elincane lase-Golconda linezinsiza eziyisisekelo, ezihlanganisa isitolo esincane segrosa, izindawo zokudlela ezimbalwa, namabha.
Uma lokhu ukuvakashelwa kwakho kokuqala, sizohlela ukungena ngaphambi kokusesha ukuze sikubonise izinto eziyisisekelo, ngemva kwalokho, ungakwazi ukuza ngokuzethemba uhambe ngendlela othanda ngayo.
Sakha ipulazi elihle neliyindilinga lapha. Ungase uzwe/ubone abantu bezungeza besebenza noma bejabulela umhlaba, kodwa ngokuvamile uyimfihlo, futhi ungase ungaboni muntu sonke isikhathi. Ngokwemvelo sikunikeza isikhala, ngaphandle uma simenywa ukuba sihlanganyele, nakuba singangena futhi sikubuze ukuthi uqhuba kanjani uma sikubona futhi sikhuluma. Ngezikhathi ezithile sinemicimbi yempelasonto eqhubekayo, owamukelekile ukubamba iqhaza kuyo, futhi sizokwazisa ngayo ngaphambi kohambo lwakho, kodwa esikhathini esiningi, ithule kakhulu lapha.
Uma lokhu ukuvakashelwa kwakho kokuqala, sizohlela ukungena ngaphambi kokusesha ukuze sikubonise izinto eziyisisekelo, ngemva kwalokho, ungakwazi ukuza ngokuzethemba uhambe ngendle…
UInterwoven Ungumbungazi ovelele